ဒီနေ့မှာ အသက်(၂၉) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ နီနီခင်ဇော် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဒီနေ့မှာ အသက်(၂၉) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ နီနီခင်ဇော်
နီနီခင်ဇော်ကတော့ မယ်လိုဒီဝေါလ် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သူပါ။ နီနီဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်းပဲ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ဟန်နဲ့ အားကောင်းတဲ့အသံပါဝါကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားတဲ့သီချင်းကောင်းမြောက်များစွာကို သီဆိုထားသလို သီချင်းကောင်းတွေထပ်မံထွက်ရှိနိုင်ဖို့လည်း အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားနေသူပါ။ လတ်တလောမှာတော့ The Voice Myanmar Season-3 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဒီနေ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော့ ” Happy 29th Birthday… ကျမအားငယ်နေတိုင်းကိုယ်ကိုကိုယ့်ထွေးပွေ့ထားနိုင်ဖို့ကျမမှာလက်အစုံရှိခဲ့တယ်… လဲကျတဲ့အချိန်တိုင်းပြန်ထဖို့ ခြေအစုံပိုင်ဆိုင်ထားတယ်…. အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ အားပေးစကားပြောပေးဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့တယ်…. ဟိုးတိမ်လွှာတွေအထိပျံသန်းနိုင်ဖို့ ပရိသတ်ခွန်အားတွေနဲ့ တစတစစီပြုလုပ်ထားတဲ့ အတောင်အစုံရှိခဲ့တယ် “ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်” (ယနေ့အချိန်အထိ ကောင်းရာတွေကို သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ တည့်မတ်ပေးခဲ့တဲ့ မိဘ ၊ဆရာသမား ၊သူငယ်ချင်းများ၊ ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတင်လျက်)” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့မနက်ခင်းလေးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
မွေးနေ့လေးကစပြီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါစေ နီနီရေ… နီနီအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးရင်း နီနီရဲ့ မနေ့ကမှ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ သီချင်းအသစ်လေး “Hope” ကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် PPE ဝတ်စုံ ၊ Maskတွေ နဲ့ အလှူငွေသိန်း(၅၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
ဒီနေ့မှာ အသက်(၄၉) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော် စိုးမြတ်သူဇာ